Booqashada Wasiirka G. Turkiya iyo Dagaalka Qabow ee Gobolka - Halbeeg News
Booqashada Wasiirka G. Turkiya iyo Dagaalka Qabow ee Gobolka
Wasiirka gaashaandhigga Turkiga ayaa todobaadkan booqasho ku soo maray 3 dal oo kala ah Liibiya, Suudan iyo Soomaaliya. Marka laga reebo Liibiya, Turkigu waxa uu ku leeyahay saldhig milatari labada dal ee kale, oo horey uu la lahaa xiriir diblomaasi iyo mid ganacsi oo xooggan. Marka laga soo tago Turkiga, dhanka kale, dowladda Imaraadka ayaa dagaal ugu jirtay dhawaanahan siday gacanta ugu dhigi laheyd dekadaha Geeska Afrika, waxayna joogtaa Berbera iyo dekadaha Eratariya, horayn waxa ay u joogi jirtay Boosaaso iyo Jabuuti oo haatan laga eryay.
Danaha Labada Kooxood
Marka la eego danaytan Turkiga ee gobolka waxaa loo aanayn karaa isbadalka ku yimid siyaasadda dalkaasi ka dib markii xisbiga islaamiga ee Caddaaladda iyo Horumarka ku guulaystay hanashada talada dalkaasi laga soo bilaabo 2002, oo ujeedooyinkiisu kamid tahay inuu dib usoo celiyo kaalintii hurmuud ee Turkigu ku dhex lahaayeen Muslimiinta, kadib wax ku dhaw qarni oo dalkaasi isku dhabar jabiyay siduu u noqon lahaa dal Yurub ah. Sidaa darteed Turkigu waa dal doonayo inuu noqdo quwad wayn oo Muslim ah, kuna dadaalayo siduu ku kasban lahaa saaxiibo, farsamada uu isticmaalayana waa mid laga dhex arki karo danaha dhinaca kale, iyo waxqabad la taban karo.
Isbahaysiga kale marka loo yimaado, gaar ahaan Imaaraadka, ujoodooyinka ay ka doonayaan gobolka ma aha dano cad oo la fahmi karo, Imaaraadku ma aha quwad weyn oo yeelan karta dano fog oo ka baxsan xeyndaabka Gacanka Carabta. Xagga farsamada ay u isticmaalayaan siyaasadooda gobolka iyo dekadaha ay qabsanayaan waxa ay ku koobantahay xeelado sirdoon, gadashada madaxda iyo ku milmidda loolanka gudaha dalalkaasi ka jira. Marka laga soo tago danaha yaryar ee ay yeelan karaa iyagu (sida dano ganacsi iwm) waxa ay u muuqataa inay ciyaarta u matalayaan quwado waaweyn. Marka la eego waxa ay ka qabteen dekadihii laga soo eryay, sida Jabuuti, waxaa soo baxaysa inay ujeedadu aheyd kaliya inay ka hortagaan horumarka dekedaha gobolka sameynayaan si aysan ula tartamin dekadahooda, sidoo kale waxa muuqdo in reer galbeedku u igmadeen inay quwadaha la tartamayo iyaga sida; Shiinaha, Ruushka iyo Turkiga jarta ka hor dagaan.
Dagaalkii Qaboobaa oo Dib usoo Noqday
Dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo midka milatri ee ka jira gobolka dhowrkii sano ee ina soo dhaafay waxa uu ina soo xusuusinayaa todobaatanaadkii qarnigii tagay, markaasoo dagaalkii qaboobaa ee u dhaxeeyay 2dii xulafado ee ay kala hogaaminayeen Maraykanka iyo Soofiyeetiga cirka marayay, gobolkana ahaa mid kamid ah furumaha ugu culus ee quwadaha waaweyn isku hardinayeen. Bilowgii todobaatanaadkii liibiya, Suudaan iyo Soomaaliya waxa ay ahaayeen xulufada midowgii Soofiyeeti, halka Masar, dowlahada gacanka carbeed iyo Itoobiya (ka hor inta aysan dhufays badalanin) ay ahaayeen xulufada reer galbeedka, cadaadis xooganna ay ku hayeen Soomaaliya siday ugu reebi lahaayeen Soofiyeedka.
Maanta Turkiga ayaa waxa uu ku jiraa booskii Soofiyeetka (inkastoo ay aad u kala duwan yihiin), waxayna xulafo yihiin qadar, Suudaan iyo Soomaaliya, dhanka kale waxaa xulafo ah Imaaraad, Sacuudiga, Masar iyo Eratariya, waxayna wakiil u yihiin reer galbeedka. Itoobiya oo isbabadal wayn ka dhacay ayaa waxa ay waddaa siyaasad furfuran oo ay doonayso inay kula dhaqanto dhammaan dowladaha gobolka iyo quwadaha danaynayo. Dhanka kale waxaa Jabuuti fadhiya quwadihii waaweynaa oo dhan oo iyagu kor kala socda dhaqdhaqaaqa Xooggaga gobolka.
Dhamaadkii Dagaalkii Qaboobaa iyo Dayacii Soomaaliya
Burburkii dalkeenna waxa uu ku soo beegmay dagaalkii qaboobaa oo dhamaaday, kala furfurashadii Midowgii Soofiyeeti iyo Maraykan oo noqday quwada wayn ee kaliya, waxaana meesha ka baxay baahidii naloo qabay. Dhanka kalana dowladihii Carabta ee ina danyn jiray waxa ay ku mashquuleen isbadaladii ka dhacay Bariga Dhexe, kadibna isku dhacii Maraykanka oo hogaaminayay UNISOM iyo Gen. Caydiid ayaa sabab u ahaa in beesha Caalamka faraha kala baxaan Soomaaliya, Soomaliyana waydo cid garab istaagta.
Dhufayskeen ka Dagaalanaaa Degaaalkan Qabow?
In badan waxa ay Soomaalida la’eyd dowlad wayn oo gacan qabata, sababaha daba-dheereeyay dagaalkeeni sokeeyana waxaa ka mid ahaa maqnaashaha garab shisheeye oo la aamini kara, hadaba maanta waxa jiro dagaal qabow oo abuurayo fursado aan kaga faa’iideysan karno dib-u-dhiska dalkeena iyo dowladdeenna (oo lamid ah kuwii aan helnay todobaatanaadkii ee aan xajisan waynay mirahoodii), waa hadii aan marka hore dajinaa xisaab sax ah oo aan ku galno dagaalkan qabow.
Maadaama aan hadda mowqif ahaan u dhawnahay isbahaysiga Turkiga iyo Qadar waa inaanan lababaynin oo aan luminin kalsoonidooda, iyagana wax la qabsannaa, isla markaana aanan qaadin talaabooyin aad uga caraysiiya dhanka kale. Qorshaheenna siyaasadeed ee fog iyo danaheenna waaweyn waa inaysan noqon kuwa lagu jaan gooyo isbadalada maamullada siyaasadeed ee afartii sanaba mar dhacaya, ee uu noqdaa qorshe qaran oo fog oo maamul walba oo yimaado kasii ambaqaado halkii uu joogay. Waa inaan u talo badinnaa xiriirka dibadda iyo farsamada uu u baahan yahay dagaalka qabow ee gobolka ka socda.
Gabagabadii: haddii aan maanta ka faa’iidaysan waynno danaynta nala danaynayo, oo aan hirgalin wayno mashaariicda huromarineed ee heelanka na loogu yahay, waxaan ku noqon doonnaa go’doonkii iyo dayradii aan ku jirnay mudada dheer, masuuliyadda dayacana waxaa yeelan doono madaxda dalka.
Qaraxyo is-xig xiga oo Muqdisho ka dhacay
10 qof oo ku dhimatay qaraxyo ismiidaamin ah oo Muqdisho ka dhacay